Iintshatsheli ze Sikunye - Sikunye
Iintshatsheli ze SikunyeIvo Kittel2021-03-09T09:46:33+02:00
Iintshatsheli ze Sikunye
Iintshatsheli ze Sikunye ngabantu abanefuthe lokuzinikela ekuxhaseni uluntu lwamabandla abo ukuba bamanyane kananjalo bakhathalela iintsapho ezinabantwana abakwiNtsuku zokuQala eziliWaka bezelwe.
Intshatsheli ze Sikunye ngabalandeli bakaKrestu abaxhasa iinkokheli zebandla ukuba bakhulise ibandla labo libe luluntu olunobubele noluxhasa iintsapho ezinabantwana abancinci. Ezi ntshatsheli zidlala indima yesikhokhelo ukuseka intlelo-nkqubo zebandla, ukufumana amavolontiya okundwendwela iintsapho nokuqala iincoko nabanye ukuze babone ukuba ibandla yindawo elukhathaleleyo uluntu neentsapho.
Iintshatsheli ze Sikunye zikhokhela iqela labantu abazibandakanya ekukhonzeni iintsapho. Bayaphulaphula kubazali, bafumane amathuba kananjalo baqhagamshelane neenkokheli zebandla ukuze bakwazi ukuhlela kunye iindlela abanokukhonza ngayo iintsapho. INtshatsheli ayiwenzi wonke umsebenzi ngokwayo, kodwa ifumana abantu babeyinxalenye yeqela ize yona ikhokhele eloqela labantu abenza umsebenzi. INtshatsheli ngumntu olikhonco phakathi kwebandla, neSikunye kananjalo abesisithethi esazisa wonke umntu obandakanyekayo ukuze bonke bazi okuqhubekayo. INtshatsheli ikhokhela ikqubo yokwenza uhlelo oluzakulandelwa libandla ekukhonzeni iintsapho kakuhle.
Ingaba uyafuna ukuba yinxalenye yoku?
Ingaba unguye na umntu onokwenza izinto zenzeke ngokuthi utsale abanye babeyinxalenye yokuqinisa nokuxhasa iintsapho. Ukuba kunjalo, nanga amanyathelo alandelayo onokuwathabatha:
Thetha nenkonkeli yebandla lakho. Siyakholelwa ukuba yinto elungileyo ukuba ubukhokheli bebandla bazi ngamaphulo okukhonza iintsapho. Ukuba sele umfundisi elibandakanyile ibandla lakho kwinkqubo yeSikunye, oko kuthi sele besazi ngeSikunye. Ukuba abanalwazi nge Sikunye bameme beze kuzibonela inkqubo yeBandla noBomi obuselula ukuze nabo babeyinxalenye.
Bhalisa Njenge Ntshatsheli. Gcwalisa uxwebhu (ifomu) lwesicelo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba siyakwazi ukuqhagamshelana nawe, sikuxhase, kananjalo sikwazise ngeentlelo-nkqubo ezizayo kunye nezixhobo ezinokukunceda.
Sebenzisa uluhlu lwezixhobo nezinto zokusebenza kwesisi khokhelo samaqela eNtsuku zokuQala eziliWaka. Oku kukunika iinkcukacha ngezixhobo zokukunceda uqhube uye phambili. Hlola apha izixhobo zokusebenza ezipheleleyo ukuze uphenduleke nemibuzo onokuthi ube unayo.
Qalisa ukukhulisa iqela. Usebenzisa izixhobo ezikwisikhokhelo sakho, Qalisa ukuthetha namanye amalungu ebandla ocinga ukuba angaba nomdla ekukhonzeni iintsapho. Oku ufanele ukwenza nabanye abantu. Inyathelo lokuqala kukuba uzibandakanye nohlelo oluthi ‘iBandla noBomi obuselula’ oluhlalelwa kwiqonga lwe-intanethi ukuze wazi nzulu ngoluhlelo.
Zibandakanye kuHlelo-nkqubo lweNtshatsheli. Ezintlelo zihlalelwa kwi-intanethi zibalulekile ukukuxhobisa ekuze ukwazi ukwenza uhlelo lwebandla lakho ngendlela eliza kukhonza ngayo iintsapho. Oku ayikokujonga indlela enza ngayo amanye amabandla kodwa ukujonga indlela enokunisebenzela wena neqela lakho nebandla lakho nisebenza ngezinto eninazo. Hlola ngakumbi apha